Moe Kai: mixed races
ဒီရက်ပိုင်း တွေရတဲ. လူနာ အများစုနဲ. ပါလာတဲ့ ကလေးလေးတွေ တွေ.ရတာ အဖြူအမဲ ရောမွေးထားတာလေးတွေပဲ များနေတယ်။ အသားညိုတိုတို၊ ဆံပင်က ကပ္ဗလီအကောက်လေးတွေနဲ.။ အသားက ဝါတာတာ မျက်လုံး အညိုလေးတွေ။ ဆံပင်က နက်မှောင်လို. မျက်လုံးလေးက ပြာတာတာ ညိုညိုတိုတိုလေးတွေ ... တွေ.ရတာ စုံနေတာပဲ။
အဖြူနဲ. ကပ္ဗလီ၊ အဖြူနဲ. ကရေဘီရန်း၊ အဖြူနဲ. middle east (မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်တယ်မသိ)၊ အဖြူနဲ. အာရှသား (ကုလား တရုပ် အစုံ) အဟဲ တို.မြန်မာတောင် ပါလိုက်သေးတယ်နော် ရောစပ်လို. မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေ အသားအရောင် ဆံပင်အရောင် ရောင်စုံ ရောစပ်လို.ရယ်ပါ။
ကျမ အနေနဲ. လူမျိုးရေး ခွဲခြားတဲ့ စိတ်ဓါတ် မရှိပေမယ့် စိတ်ထဲ တွေးမိတာက နောင် ၁၀နှစ်ဆိုရင် Caucasian ဆိုတာတောင် ရှိပါဦးမလားလို.။ အားလုံး Mixed Races လေးတွေပဲ ဖြစ်နေမလား။ ကမ္ဘာရွာကြီးရဲ့ ကောင်းကျိုးလား ဆိုးကျိုးတွေလားပါပဲ။